I-"Grace Grace" Icala - Ukubulawa kukaRiley Ann Sawyers
Umbulali kaRiley Ann Sawyers
Ngomhla we-Oktobha 29, 2007, umlobi-ntlanzi wafumana ibhokisi yokugcina iplastiki ehlanjululwe kwisiqithi saseGalveston Bay esineqela lentombazana eneminyaka emibini. I-autopsy ibonakalise ukuba umntwana, ogama lingu "Baby Grace" ngabaphandi, unengqayi ephukile. Amapolisa aseGalveston akhulule iingubo zezingane ukuba aqalise umzamo wonke wokumfumanisa.
I-Jury yoBantwana ibona u-Stepfather Unetyala
Igosa likaGalveston lizibophezele ngaphaya kweeyure ezisihlanu ngaphambi kokumangalelwa indoda eneminyaka engama-26 ubudala yokubulala ngokutsha ngokubulala ukufa kwentombazana eneminyaka emi-2 eyayiziwa ngeenyanga nje ngokuba "uBrace Grace." URoyce Clyde Zeigler II watholakala enetyala lokubulala ekufeni kukaRiley Ann Sawyers.
Okwesibini 'iNdodana Yomntwana' Uvavanyo oluqhubekayo
Oktobha 28, 2009
Igosa lomntu osolwa ngokubulala uRiley Ann Sawyers, oneminyaka engama-2 ubudala, utshele i-jurors ukuba umxhasi wakhe ulahlekile umzimba wakhe eGalveston Bay, kodwa akazange abe nantoni na into yokufa kwakhe, njengoko waqala ukubulala. URoyce Clyde Zeigler II, 26, uhlawuliswa ngokubulala ngokutsha kodwa akayi kufumana isigwebo sokufa xa enetyala.
Umama Ufumene Unetyala 'Lobubele Bomntwana'
I-jury yaseTexas yenzanga ngaphantsi kweeyure ezimbini ngaphambi kokuba ibuyele inetyala lokubulala isigxina somama oneminyaka emi-2 ubudala eyaziwa nje ngokuba "Ubomi Bantwana." UKimberly Trenor usolwa ngokubulawa kukaRiley Ann Sawyers, umzimba wakhe ufunyenwe kwi-tub yokugcina ehlanjululwe kumanxweme aseGalveston Bay.
Umfana ontshitshisiweyo wathobisa uMama, 'Ndiyakuthanda'
Nangona wayebethelwa ukufa, uRiley Ann-Sawyers oneminyaka emi-2 ubudala wazama ukuyeka ukuxhaphazwa ngokusondela kumama wathi, "Ndiyakuthanda," ngokutsho kweengxelo zokuvulwa kwecala lokubulala lakhe iminyaka engama-20 unina.
Ummeli wesithili uKayla Allen utshele ii-jurors ukuba unxanxatheliso lomntwana ongenamdla aluzange aluyeke ukusetyenziswa kakubi, okugqibeleni kwaholela ekufeni kwakhe.
I-'Grace Grace 'yoLwabiwo oluCwangcisiweyo Iveki ezayo
Unina wentombazana eneminyaka emi-2 eyaziwa ngokuba ngu "Baby Grace" uye wathwesa ityala lokunciphisa ubungqina kwimeko kodwa uya kujamelana netyala lokubulala ngokutsha kweveki ezayo. UKimberly Dawn Trenor, oneminyaka engu-20, uhlawuliswa ngokubulawa kukaRiley Ann Sawyers ngoJulayi 25, 2007.
Uvavanyo oluhlehliselwe uMama we "Baby Grace"
Novemba 5, 2008
Njengoko ukhetho lwamajaji lwaluza kuqalisa ukuthethwa kwecala lokubulala lomama "Baby Grace," abashushisi bhengeze ukuba ityala likaKimberly Trenor lihlehliselwe kude ngoJanuwari. UTrenor ubhekene necala lokubulala ngokutsha kwintombi yakhe, uRiley Ann Sawyers.
Ukhetho lweJuri luqala ngoMama oBantwana
Unina wentombazana eneminyaka emibili ubudala eyaziwa ngokuba ngu "Baby Grace" emva kokuba umzimba wakhe ufunyenwe kwisigubungelo saseGalveston Bay ubhekane novavanyo ngecala lokubulala umntwana. Ukukhethwa kweJury kuqale ngeliveki kuKimberly Trenor obetyala ngokufa kwentombi yakhe, uRiley Ann Sawyers.
'Ubumnandi Bantwana' Unina Ukhulelwe kwakhona
Epreli 17, 2008
Unina kaRiley Ann Sawyers ukhulelwe kwakhona kwaye ityala lakhe lihlehliselwe kude emva kokuba ebelethe.
Okwangoku, i-Galveston tshutshisa baye bahlaselwa ngenxa yokungafunanga isigwebo sokufa kuKimberly Dawn Trenor kunye nomyeni wakhe uRoyce Clyde Zeigler II.
Isiqithi esibizwa ngokuba yintombazana e-'New Grace Grace '
Matshi 18, 2008
Isiqithi esincinane saseGalveston Bay apho umlobi ofumene i-Riley Ann Sawyers, oneminyaka emibili ubudala, ebizwa nge-plastic container, ibizwe ngegama lentombazana enkundleni ye "Baby Grace". Isiqithi sele sabizwa ngokuba yi "Riley's Island" yiHitchcock, eTexas, kwiKhomishoni yesiXeko.
'Ubumnandi Bantwana' Iqabane Elijongene Nokujamelana Nezohlwayo Zokufa
NgoDisemba 11, 2007
Ibini eliseTexas elityholwa ngokunyanzelisa ubungqina kwi-"Baby Grace" ityala ngoku lichazwe ekubulaweni komkhulu. UKimberly Dawn Trenor kunye nomyeni wakhe, uRoyce Clyde Zeigler II, batyholwa emva kobungqina be-DNA obunobungqina obucacileyo obuncinane ebhokisini lokugcina eplastiki eGalveston Bay njengendodakazi kaTrenor, uRiley Ann Sawyers.
'Ubumnandi Bantwana' Babethatywayo, Bashaywa Ekufeni
Novemba 27, 2007
Umncinane isizwe esaziwa ngokuthi "Baby Grace" emva kokuba umzimba wakhe uhlambulule eGalveston Bay ebhokisini lokugcina iplastiki wahlushwa waza wabethwa wabulawa ngumama nonina, ngokutsho kweenkundla zamatyala. Uneminyaka emibini ubudala, ogama lakhe linguRiley Ann Sawyers, wabulawa unina, uKimberly Dawn Trenor kunye nomyeni wakhe uRoyce Clyde Zeigler II.
I-Texas Couple eboshwe kwi-'New Grace Grace '
NgoNovemba 26, 2007
Indoda yaseTexas kunye nomfazi ongenangxelo yokulahleka kwengane yakhe ibanjwe ngokubhekiselele kwimeko yentombazana eneminyaka emibini ubudala umzimba wayo ufunyenwe kwibhokisi yokugcina ngaselunxwemeni lwaseGalveston Bay. Amapolisa alindele iziphumo zeemvavanyo ze-DNA ukuqinisekisa ubungqina bentombazana abayibiza ngokuthi, "Baby Grace."
IDuke University Lacrosse Team Rape Scandal
Ukubulawa kukaCarlie Brucia
Ibali likaJohn Battaglia Ngubani owabulala iintombi zakhe zokuziphindezela
INtranscript yeNkundla yeSivumelwano seBTK
Imbali kaCharles "Tex" Watson weManson Family
Icandelo leRowin Row: Ukugqitywa kokugqibela koMama
I-10 yeziTyala eziPhambukayo
I-Musical Chord icacisiwe nje
Ukukhetha Imihlobiso yeSikolo sakho seeholide
Amasiko aseShayina kunye neziThutho zeZiko
5 I-Hilarious Marilyn Monroe IiKomidi eziqinisekisiwe zokwenza Uhleke
Iiprojekthi zeCaffeine Science Fair
Ban Chiang - Bronze Age Village kunye namangcwaba eThailand
Yintoni iAnthrax? Ingozi no Khuselo
Ukunyuswa kweMveliso Inkcazo
I-RBC Heritage Heritage kwi-PGA Tour
Iintombi zeeNtlanzi eMitosis naseMeiosis
Ngexesha loop - Ukuqala kwe-Perl Tutorial, izakhiwo zolawulo
Imfundo Yokwenyama Yokwenziwe kwabafundi abakhubazekileyo
I-Tyrannosaurs - I-Dinosaurs Eninzi Eyingozi
Amabhayisikobho amahlanu e-Acid Trip
Yintoni Ingcaciso Yobumbano Ekubunjweni?
Umehluko phakathi koMcebisi kunye noMcebisi
IYunivesithi yaseMissouri GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data